UKolisi usole ubudedengu bequnjwa phansi yi-Australia
UMARIKA Koroibete embangweni webhola uS’busiso Nkosi wamaBhokobhoko ngesikhathi la maqembu atholene emdlalweni weRugby Championship eCBus Stadium, Gold Coast, eQueensland, Australia ngeSonto ntambama Isithombe: EPA/REGI VARGHESE
USOLE ukungaziphathi kahle namanye amaphutha abawenzile ukaputeni wamaBhokobhoko, uSiya Kolisi, behlulwa yi-Australia ngo 28-26 emdlalweni weRugby Championship ngeSonto ntambama.
Umdlali we-Australia ogijima kwi-flyhalf, uQuade Cooper, ube yiqhawe ngokungalibheki ipali kulo mdlalo wombhoxo obuseCbus Super Stadium.
UCooper uphinde washaya i-try kulo mdlalo wasiza iqembu lakhe ukuthi linqobe okokuqala kulo mqhudelwano kule sizini. AmaBhokobhoko abeqala ukudliwa emuva kokushaya i-Argentina kabili.
Kuyiwe ekhefini iWallabies ihamba phambili ngo 19-11.
UKolisi uke wakhishelwa ngaphandle imizuzu engu-10 esiwombeni sokuqala emuva kokudlalisa kabi uTom Banks.
UMatt Philip we-Australia naye uzitholele ikhadi eliphuzi evimba amaBhokobhoko ngendlela engekho emthethweni ezama ukweqa umugqa wokushaya i-try.
Ukungaziphathi kahle kuqhubekile nasesiwombeni sesibili kuwona womabili amaqembu, uWillie Le Roux wakuleli unikezwe ikhadi eliphuzi esolwa ngokuphebeza ibhola ngenhloso, uFolau Fainga'a weWallabies, naye wajeziswa ngokudlala kabi.
I-Australia ithole i-try eyodwa, eshaywe ngu-Andre Kellaway, ohlangothini lwamaBhokobhoko uBongi Mbonambi ubeke eyodwa, amabili abekwa ngu-Malcolm Marx.
Bekubukeka sengathi amaBhokobhoko azowuthatha umdlalo emuva kwe-try yesibili kaMarx, ewabeke phambili ngo 26-25 sekusele imizuzu eyisishiyagalolunye, kodwa uCooper wawaphuca iqatha emlonyeni ngephenathi ayibeke phakathi ngomzuzu wokugcina.
UCooper uqede lo mdlalo engashwebanga, uvalele phakathi i-conversion eyodwa namaphenathi ayisikhombisa. UHandre Pollard kumabhokobhoko, wenze okungajwayelekile ehlulwa i-conversion eyodwa namaphenathi amabili, uDamian Willemse washweba enye i-conversion.
"Sizenzele phansi ngokungaziphathi kahle kulo mdlalo. Kuleli zinga uma udala inqwaba yamaphenathi njengoba senzile kulukhuni ukuthi unqobe," kusho uKolisi.
"Ngaphandle kwamaphuzu esibanike wona ezandleni siphinde samosha awethu abezosibeka endaweni engcono kulo mdlalo.
"Siyakwazi okungalungile esikwenzile futhi sizosebenza kanzima ukuthi sikulungise ngaphambi komdlalo olandelayo.
"Ngeke sisole umdlali oyedwa ngoba kuyenzeka noma yimuphi umdlali angenzi kahle. Bekungelona usuku lwethu, bekungusuku lukaQuade njengoba yena edlale kahle."
Umqeqeshi wamaBhokobhoko uJacques Nienaber uthe noma bephoxekile ngalo mphumela kodwa kukhona okuhle azokuthatha kuwona.
Ubuye waqinisekisa ukuthi umdlalo bazowubukisisa ukuze bathole isithombe esingcono ngamaphenathi abawadalile.
"Phezu kwamaphuzu esibaphe wona sishaye ama-try amathathu bona bathola eyodwa kuphela. Besinawo amanye amathuba amahle atholwe uLukhanyo Am noSbu Nkosi. Lokho kusho ukuthi cishe sashaya ama-try amahlanu," kusho uNienaber.
"Ngeke ngikwazi ukusola onompempe ngoba bebethatha isikhathi sabo ngaphambi kokwenza izinqumo.
"Sisazohlala phansi sibheke uhlobo lwamaphenathi esiwadalile. Uma kungamaphutha amancane sizowalungisa kodwa uma kubonakala ukuthi ubudedengu babadlali bethu mhlawumbe kuzodingeka sibashintshe labo badlali."
Komunye umdlalo we-Rugby Championship odlalwe ngeSonto ekuseni, iNew Zealand izigwazele ibhece idla i-Argentina ngo 39-0.
AmaBhokobhoko azophinde abhekane ne-Australia ngoMgqibelo ekuseni eSuncorp Stadium eBrisbane, i-All Blacks idlale ne-Argentina emini enkundleni efanayo.